मनोज गजुरेल, मंसिर २१, २०७४
गठबन्धनलाई तीन प्रकारले हेर्नुपर्छ— चुनावी, सुनामी र गुनामी । चुनावी गठबन्धन चुनावसम्म हुन्छ । सुनामी चुनावअघि नै टुट्न सक्छ । गुनामी गठबन्धनले धेरैलाई धेरै खालका गुन लगाउँछ । अहिलेको गठबन्धन गुनामी गठबन्धन हो । यसलाई गुनकै हिसाबले बुझ्नुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २१, २०७४
खै के लेखेको छ यो निधारमा ? आजसम्म लभ नै पर्न सकेन । बिहे त झन् टाढाको कुरा भयो । म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्याकेन्सी खाली छ, १६ देखि १९ सम्मकी युवती सम्पर्कमा आउनुहोला । यसपालि बिहे गर्ने सोच छ । पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, मंसिर २१, २०७४
क्याप्टेन उप्रेती भन्छन्— युवापुस्तालाई नागरिक उड्डयनतर्फ आकर्षित गर्न यो काम आवश्यक थियो । सिनामंगलस्थित क्यानको ८ हजार वर्गफिट जग्गामा निर्मित यो म्युजियम दसवर्षे साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
कतिपय मानिसले छालालाई बाहिरी सौन्दर्यसँग मात्र जोड्छन् । बजारमा पाइने कस्मेटिकको प्रयोगले मात्र छाला राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैमा छ, तर स्वस्थ जीवन जिउन छालाको हेरचाह गर्नु तथा त्यसलाई तन्दुरुस्त राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दैनिक केही समय दिए केही साताभित्रै छालामा निखार ल्याउन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पुतली आसन र यसका फाइदा
लोकनाथ खनाल, मंसिर २१, २०७४
 पुरुषहरूको प्रोस्टेड ग्रन्थिको समस्यामा लाभदायक हुन्छ ।  महिलाहरूको महिनावारी गडबडी तथा तल्लो पेटको समस्यामा लाभ मिल्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, मंसिर २१, २०७४
अमेरिकाका एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिकाका लागि मोटर रेस कोर्स बनाइदिएका छन् । अमेरिकाका व्यापारी एवं सेमी प्रोफेसनल रेसर एलन विल्जिगले आफ्नो घर पछाडि रहेको निजी जमिनमा प्रेमिकाका लागि फर्मुला वानको जस्तै रेस ट्रयाक निर्माण गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, मंसिर २१, २०७४
एचआईभी पेटमा पुगेपछि त्यहाँको एसिडको सम्पर्कमा आउँदा बाँच्ने स्थिति नै रहँदैन, तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा छ । तपाईंले कचौरा वा चम्चामा राखिएको वीर्यपान गर्नुभएको त पक्कै पनि होईन होला भन्ने ठानेको छु । वीर्यपान गर्ने स्थिति सामान्यत: मुखमैथुन गर्दा आउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता प्रदीप खड्काले पनि झन्डै २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर चलचित्र लिलिबिलीमा अभिनय गरिरहेका छन् । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई भने अभिनेता तथा निर्माता आर्यन सिग्देलले चलचित्र कायराका लागि १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको चर्चा चलिरहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
तस्बिरमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छिन् । कालो स्विमसुट, स्मोकी आँखा तथा समुद्रको रमणीय लोकेसनको झलक ती तस्बिरमा देख्न सकिन्छ । फिल्मफेयरको आवरणमा दीपिका गुलाफी पुलओभरमा थप आकर्षक देखिएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्